isikhwama Cooler eziklanyelwe travel ubunjalo noma izwe ehlobo noma uhambo olude. Ukuze ugcine ukudla chilled, ukupakisha ngokwanele kubo kudivayisi, bese ungakwazi ukujabulela ukudla futhi okumnandi. Ukuze ukuzitika ngokugcwele ngento isikhwama Thermo, kumelwe ukhethe ikhophi kakhulu eliphezulu futhi multi-functional.
Kanjani isikhwama ezipholile?
Umthelela omuhle ukusebenza lwesiqandisi ezivamile kusekelwe yokuthi isitoreji imikhiqizo alisekelwe ekuqaleni kuchazwa futhi kudingekile lokushisa yabo ukulondolozwa. Nokho, isikhwama cooler ukuthi isebenza kanjani? Umenzi uchaza ukuthi ngaphakathi it has izimo ukulondoloza lokushisa elilungile. Lokhu kwenza okwamanje apharathasi ucwecwe olwaluhlanganisa zonke izingxenye into kanye saline esimweni eqandisiwe, inendima ebalulekile ekulondolozeni emoyeni obandayo esimweni angashintshiwe.
Indlela siphela isikhwama ezipholile, kungaba kuqhathaniswa ukusebenza thermos, kodwa kulokhu, umphumela reverse. Okwenza le divayisi isebenzisa izinga okusezingeni nokunokwethenjelwa ezishisayo ukwahlukanisa izinto, ngakho le mikhiqizo zisesimweni esikahle amahora ambalwa ngaphambi kokuthi isetshenziswe, nokho kube iyunithi enjalo Ungahambisa ngisho at amabanga amade, beletha ukudla selehlile. isikhwama Cooler kuyoba usizo uma ngabe ukhethe ikhophi izinga.
Imfihlo ukusetshenziswa ngemfanelo isikhwama Thermo silula. Ngaphakathi kuba termokorob impahla main ngokukhiqiza polyethylene okuyinto foamed, pre-uphawu futhi ethe njo. It is Nokho embozwe ungqimba umfaniswano ucwecwe, ngaphezu yobunzima ukumelana exchange ne lokushisa imvelo futhi umphumela sibonakalisa litholakala. Ukuze silondoloze lokushisa njalo accumulator abandayo zisetshenziswa, ukusebenza ngenxa brine. Lokhu kuchaza ukuthi kwenzeka kanjani isikhwama ezipholile.
Ngaphambi kokukhetha ngale ndaba isidingo ucacise kahle indlela ukudla iyonikezwa eya endaweni. Uma ukudla kuyoba emotweni, ungakwazi thatha isikhwama cishe 50 amalitha ivolumu. It kufanela ngokuphelele emotweni yakho bese uvumele ukuba abeke eziningi imikhiqizo, kodwa eyolanda bawuthwale wakhe ukuba uthwale ezokuthutha zomphakathi cishe akunakwenzeka. Uma ufuna ukugcina ukudla isikhathi eside, kufanele ukhethe semali izinto. I ebanzi isikhwama, amabhethri namandla kakhulu efakwe kuwo. Lokhu kuzosiza baqonde indlela isikhwama ezipholile.
Ngokuvamile ekhethekile fibre zokwenziwa ngoba Indwangu asetshenziswe ekukhiqizeni izikhwama esiqandisini. izinto ezinjalo hhayi kuphela ukwazi bakuhlukanise okuvikela umswakama, kodwa futhi ukuba simelane Ukungena imisebe ultraviolet ukuthi kufanele kubhekwe uma kuphakama umbuzo: "? okusebenza isikhwama Cooler kanjani"
Khetha ezinhle ngangokunokwenzeka uma ukuqinisekisa ukuthi ingaphandle evamile anezinhlaka-polyester, inayiloni noma PVC isicelo. Lemibiko izindwangu kulula ukuhlanza, bese boma ngokushesha. has zifudumele pad Foam ukuthi olele phakathi engxenyeni engenhla kanye thermobags esitsheni ufakwa sturdiness Ngo isikhwama ngasinye esinjalo.
Lapho uthenga Thermos abakwazi indiva oyiyo yangaphakathi njengoba kubalulekile ukubeka imikhiqizo. Abanye abakhiqizi ezithanda sentengo, kuvuleke ngaphakathi akuyona high quality PVC kanye polyethylene isetshenziswa, okuvumela ukulondoloza okuhle phakathi ukukhiqiza. Kufanele kukhunjulwe ukuthi kulezi amayunithi ulahlekelwe ukudla kwabo ukubukeka isheshe fresh, ungakwazi ukushintsha iphunga kuka usebenzisa esiqandisini noma izinga isikhwama Thermo. Ngisho nalapho ibhethri ekuvimbeleni ephelele imikhiqizo ezibandayo esikhwameni ingagcinwa ayibi ngaphezu kuka-3 amahora.
Thermos yezimoto Ikakhulukazi
Cabanga into ezifana esikhwameni imoto ezipholile. Njengoba idivayisi kuyinto ukusebenza - okuhle noma okubi - ke kunqunywa izinga izimpahla ezisetshenziselwa womshini izingqimba ezintathu:
Kwangaphandle. Wadala kusukela plastic ngokuvamile has a umthunzi ukukhanya.
Langaphakathi. Lokhu esitsheni, esebenza njengesikhali Isitsha ukusonga futhi emaphaketheni.
Layer. Ingabe umugqa ekhethekile polyurethane foam, esinikela esiphezulu zihlale zifudumele. Izinga kanye nokwethulwa ngokuyiko esiphathiswa wokugoma ngokuvamile kunqunywa ukushuba lesi sendlalelo. Ngokuvamile kuba 3-5 cm, okuyinto inkomba engcono. Lokhu kuzosiza ukuba baqonde indlela ukukhetha isikhwama-esiqandisini. Amathiphu abonisa lokho kudingeka baqaphele uma uthenga.
Lapho isakhiwo esinjalo waphawula ukugcina imikhiqizo isikhwama kungaba amahora afika kwangu-12, ngisho ngaphansi kombandela amakhaza ukuvala shaqa ibhethri. Uma sekuphelile kukhona amabhethri ekhethekile, imikhiqizo, freshness yibhange zigcinwe amahora angu-24 nokuningi.
Lapho usacabanga ukuthi ukuthenga wokugoma yenethiwekhi, ukucacisa ukujiya kwezingange zawo, bese uqhathanisa nabanye. Uma izindonga umncane kakhulu impela, cishe akunakwenzeka ukuhlola ezishisayo ukwahlukanisa ungqimba, akudingekile ukuthenga imodeli, ngoba ukubuya kwehlobo ngeke bakwazi ukulondoloza imikhiqizo. I mkhulu ungqimba, ukunakwa ngaphezulu kufanele ikhokhwe hlobo locingo. kunqunywa Ngakho izinga isihloko ezifana isikhwama ezipholile. Yini kufanele sinake ngoba izinga netimphawu zonke izingqimba.
Isendlalelo zokuzivikela yenziwa kuphela PVC, lapho impahla esebenzayo kumele kube nje kuphela qualitative, kodwa futhi Friend ngokuphelele. Ukuze indwangu esinjalo asisho ukuthi akudingeki badinge ukunakekelwa okukhethekile. Kwanele ugeze khona ngezikhathi ezithile, futhi bome ngokushesha okukhulu. Ngezinye izikhathi PVC ekhethekile isetshenziselwa umkhiqizo oluvikelayo, ebusweni angafaniswa nge ziyinhlanganisela, ukuthi ikuvumela ukubeka izinto zibe uchungechunge nge tetrapaketami. Ngalo inikeza nokugcinwa lokushisa ezengeziwe, futhi ukuvikelwa umnkantsha ukudla isikhathi eside.
Rolls futhi ezizibeni ehlombe
Lapho inani isikhwama Thermo akuyona enkulu kakhulu, kungaba kwenziwe kalula ehlombe. Kuze kube yimanje, abakhiqizi ukunikeza isibambo ekhethekile ububanzi futhi ukhululekile has a ulwelwesi esithambile. Uma isikhwama elinesimo yenqwaba, njengoba izesekeli linikeza ezinamasondo ngokwanele ezinkulu nge isibambo efinyelela futhi retracts uma kudingeka, ukuze ngingasebenzisi ukuba eliphakeme kakhulu. It ingalungiswa ezinguqulweni eziningana, ukukhetha isikhundla esikahle kakhulu.
Ukuba khona izibambo nesihluthu
Lapho kukhona kukhethwa isikhwama-esiqandisini, kufanele sinake lula yayo kanye nokuphepha lisetshenziswa, zezici ezinquma ngoba okuyizinto izibambo nesihluthu. Uma kukhona sivala ekhethekile, awukwazi ncamashi ukhathazeke ukuthi isikhwama vskroyut izingane noma nokuqukethwe kwakho ukufinyelela izilwane. Ngokuvamile amadivayisi zokuzivikela aboshelwe inhlangano isibambo. Ziyakwazi kulula kakhulu ukuphatha, futhi ukuvula naseduze akudingeki ukusebenzisa eqile.
Indlela ukukhetha Amathiphu likaphethiloli lawnmower
Kusukela ubuhlungu - emuva ukuqeqeshwa ngendlela ejimini futhi ezinye izindlela
"Sulfargin": yokusetshenziswa. Uphenyo odokotela mayelana izidakamizwa, izinkomba